kugarisana pamwe Mahwindo 10
mubvunzo kugarisana pamwe Mahwindo 10
2 Makore mashoma 2 apfuura #344 by alainthomas21
Ko FSX kunoenderana mahwindo 10?
Thanks kwako mhinduro ..
2 Makore mashoma 2 apfuura #345 by JanneAir15
Hongu, zvinoshanda pamusoro Windows 10. Ndiri chaizvoizvo kushandisa FSX musi Windows 10 uye inoshanda zvakanaka.
2 Makore mashoma 2 apfuura #346 by Gh0stRider203
KANA uine chero nyaya, nzvimbo iyi kungabatsira. Shamwari yangu achimhanya Steam Edition uye akanga ane zvimwe matambudziko.
2 Makore mashoma 2 apfuura - 2 Makore mashoma 2 apfuura #347 by Colonelwing
Gh0st ,,, ndina mubvunzo kwamuri ,,,
Ndine shanduro FSX GOLD Edition iri paCD bhokisi kubva Microsoft sezvo makore fiew ikozvino.
Ndiri kushandisa shanduro sezvo refu ari mukuru PC uye vachida kuwana
ari FSX munzvimbo yakakwirira mugumo wangu mutsva sim chete PC ndine ikozvino. Ndakanga ndichifunga kuti ndiwane hwemvura FSX shanduro ,,,
asi ndinoda kuva nechokwadi befort achiita hwemvura Kutama kuti wangu FSX GOLD Edition CD bhokisi shanduro ndine
wont basa musi Win 10 kuti ndine yangu itsva yakakwirira mugumo NEW PC Sim.
Ini tought FSX GOLD Editon CD Box shanduro didnt basa zvakare kana tichida kuva FSX GOLD Edition pamusoro
mutsva Win 10 PC.
Mubvunzo ,, anogona Ndichiri kushandisa kwangu CD bhokisi FSX GOLD Edition shanduro yangu itsva Win 10 yakakwirira magumo PC vakawanda
Makore kuuya ,, kana ndine kuti chinja kuti hwemvura shanduro FSX?
Kugadzirisa kwekupedzisira: 2 makore emavhiki 2 akapfuura ne Colonelwing.
2 Makore mashoma 2 apfuura #348 by Gh0stRider203
Nokutendeseka murume, handisi chokwadi. Your Gold Ref UNOFANIRA vachiri kushanda pane Ndakaverenga pano
Ndichiri kumhanya Windows 7 yagadzirwa pa-desktop wangu achiri, uye kushandisa Gold Edition.
Colonelwing akanyora: Gh0st ,,, ndine mubvunzo kwamuri ,,,
Makore kuuya ,, kana ndine kuti chinja kuna STAEM shanduro FSX?
2 Makore mashoma 2 apfuura - 2 Makore mashoma 2 apfuura #349 by Colonelwing
Ndinokutenda chaizvo Gh0st!
Hongu Ndinofunga zvichaita vachiri kushanda wakanaka ,, sezvo ini dont kushandisa chero paIndaneti vanoraramireiko ichibhururuka pamwe shanduro yangu uye nguva dzose kubhururuka offline.
Its kwete nokuti addons sezvo ini dont kuzvishandisa muupenyu hwangu FSX mafaira ,, I munoremedza addons aircrafts chete kuedza uye ipapo Kugeza navo
kure PC yangu kana kupinda zipfiles kuramba ikoko kusvikira ndinonzwa sokuti richibhururuka navo zvakare muna FSX sim mafaira zvakare.
chikuru Objectif wangu kuzodzosera Takudzai wangu PMDG B737NGX kubva DVD rangu bhokisi shanduro kuva akasimba yakakwirira magumo PC Ndine zvino Simulators chete kushandisa. Saka ndinofunga zvose zvichava kushanda wakanaka kwandiri sezvo chii Ndakaverenga pane chiutsi ,, ivo dont vane zvakawanda saka chinja aita uye wont kukanganisa nzira Ini dzinobhururuka pamusoro FSX kwenguva chaizvo kwenguva yakareba kupinda ramangwana.
Zvino sezvo tiri FSX sim pasi ,,, dzangu itsva PC Win10 ,,, Ndave kutsvaga HOTAS zvikuru kunamatira uye throttle
anoshanda zvikuru. Sezvo Logitech wangu wevekare kugadzirira kuti kuita pamusoro ,, asi zvaindipa makore akawanda kudaro ndege zvakanaka.
Unogona kunyora kwangu vamwe HOTAS mungadai funga kuti kushandisa kuti periode kwemakore vane nyaya kana matambudziko zvakanaka ,, meen ari QControl kuva totaly chikuru kana pamusoro mugumo.
Ndinoziva fiew pamisika ,,, asi ndinoda kunzwa divi rako nyaya HOTAS mungadai kunongedzera neni.
mamwe marudzi ose anogona kupindura pamusoro chii aizova HOTAS ndinofanira tsvaka kushandisa ave PRO mutyairi wendege.
Chero mutengo Tag ,, doesnt nyaya kwandiri ...
Thanks yokuitawo nemaonero ako uye zvakaitika kuti HOTAS yacho ...
2 Makore mashoma 2 apfuura #350 by Gh0stRider203
chete "paIndaneti" ichibhururuka ndinoita chaizvo kushandisa ndege Tracking Software elnaz kana ukaenda pano , Muchaona kutiza wangu, uye vamwe vari dzichibhururuka. KDFW - LFRG - KDFW ndiye My kwagara nzira elnaz ari "kubhadhara" ndizvo zvakanaka naka elnaz
2 Makore mashoma 2 apfuura #351 by Colonelwing
ndege wangu, uye vamwe vari dzichibhururuka. KDFW - LFRG - KDFW ndiye My kwagara nzira elnaz ari "kubhadhara" ndizvo zvakanaka naka elnaz
Mari iri vakadzikama Eh ,,, elnaz
Sezvo kutaurwa, handina kumbobvira haana paIndaneti achibhururuka ,, zvayo zvose zvitsva kwandiri. Asi kwete itsva kwandiri kubva chaiye zvinobhururuka nyika ,, glade kuti nzira mari zvakanaka ,, elnaz
Thanks yokuitawo ichi neni zvisangane ,, Mufaro!
2 Makore mashoma 2 apfuura #352 by Gh0stRider203
Colonelwing akanyora: ndege wangu, uye vamwe vari dzichibhururuka. KDFW - LFRG - KDFW ndiye My kwagara nzira elnaz ari "kubhadhara" ndizvo zvakanaka naka elnaz
My VA kwakaita Information kana iwe tinya Account Balance, uye kuita masvomhu, muchaona ndiri kuita VA vamwe vakadzikama mari. Ndinogara zvinosanganisira zvandiri kuita sezvo mutyairi, sezvo ini ndisa kuti kubatsira mari shiri uyewo ikozvino kana chete ndakanga kuita kuti zvakawanda RL elnaz
2 Makore mashoma 2 apfuura #356 by Colonelwing
Thanks nokuti kugovana linked naye!